सुदूरपश्चिमको चुनावी लेखाजोखा - निर्वाचन - साप्ताहिक
सुदूरपश्चिमको चुनावी लेखाजोखा
- डीआर पन्त
दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ७ मा मंसिर २१ गते डडेलधुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र कन्चनपुरमा निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशसभाका ३२ मध्ये २४ निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२ निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन भैरहेको छ ।
यो निर्वाचनमा डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अछाममा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, डोटीमा भौतिक योजनामन्त्री वीरबहादुर बलायर, कैलालीमा माओवादी प्रदेश नं. ७ का इञ्चार्ज पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट, प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सुनिल भण्डारी, पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी, पूर्वमन्त्री गौरीशंकर चौधरी, पूर्वमन्त्री मोहन सिंह राठोर, कन्चनपुरमा पूर्वमन्त्री एनपी साउद, रमेश लेखक र प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलगायतका प्रमुख नेताहरूको प्रतिष्ठा दाउमा छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भट्ट यसअघिका दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा देउवाबाट पराजित भएका हुन् । स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामअनुसार डडेलधुरामा वाम गठबन्धन ९ हजार मतले अघि छ । वाम गठबन्धन जसरी पनि यस पटक निर्वाचन जित्ने दाउमा छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टी भित्रबाट असहज नभए पनि प्रदेश सभामा भने कांग्रेसको स्थिति कमजोर देखिएको छ । देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन दुवै गुटका नेता रघुवर भट्ट र कर्णबहादुर मल्ललाई प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनाएका छन् ।
अछाममा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग क्षेत्र नं १ मा कांग्रेसका पुराना नेता भरत स्वाँरले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जिल्ला विकास समितिका सभापति रहिसकेका स्वाँर कांग्रेस अछामका सभापति पनि हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धन झन्डै १२ हजार मतले अघि छ । एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा वर्तमान सरकारका मन्त्री वीरबहादुर बलायर र एमाले नेता प्रेम आलेको प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । आले निवर्तमान निर्वाचित सांसद हुन् । दुवैबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
कैलाली जिल्लामा भने तत्काल नै निर्वाचनमा हुने हारजितको आंकलन गर्न कठिन छ । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा यो प्रदेशको सम्भावित राजधानी धनगढी क्षेत्रबाट मैदानमा छन । यो क्षेत्रबाट ३२ हजारभन्दा बढी मत संख्या भएका राना थारु समुदायमा चर्चामा रहेका एमाले नेता नारदमुनि रानालाई वाम गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको छ । स्थानीय भर्सेज टुरिस्ट उम्मेदवारको नारा लागेपछि प्रधानमन्त्री पत्नी देउवाले ३ करोड बढी मूल्यमा धनगढीमा घरसमेत किनेकी छिन् । कैलालीको क्षेत्र नं ४ मा माओवादी प्रदेश इन्चार्ज पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट र कांग्रेसमा देउवा पछि यो क्षेत्रमा प्रभावशाली मानिने नेता सुनिल भण्डारीकाबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । यो क्षेत्रमा डोटीबाट बसाई सरेका मतदाताको ठूलो संख्या छ ।
भट्ट र भण्डारी दुवै डोटीको गढसेरा क्षेत्रबाट बसाई सरेका हुन् । थारु मतदाता यो क्षेत्र निर्णायक भूमिकामा छन् । माओवादी नेता भट्ट बिगतमा थरुहट आन्दोलनका विपक्षमा अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा लागेको आरोप थारुहरूले लगाएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका भण्डारी भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो पटक उम्मेदवार भएका हुन् । कैलालीको क्षेत्र नं ३ मा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी र वाम गठबन्धनका गौरीशंकर चौधरीबीच पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ । कैलालीको क्षेत्र नं १ मा दुई महिला नेतृबीच पनि कडा प्रतिस्पर्धा छ ।
कांग्रेसले ईश्वरी न्यौपाने र वाम गठबन्धनले एमाले नेतृ गरिमा शाहलाई उम्मेदवार वनाएको छ । क्षेत्र नं २ मा एमाले परित्याग गरी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वमन्त्री मोहन सिंह राठोर र वाम गठबन्धनबाट राठोर मन्त्री हुँदा निजी सहायक रहेका झपट रावलबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
कन्चनपुरमा कांग्रेसका दुई चर्चित नेताको प्रतिष्ठा दाउमा छ । पूर्वमन्त्री रमेश लेखक कन्चनपुर क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार छन् । लेखकसँग एमालेका डा. दीपकप्रकाश भट्टले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कन्चनपुरको क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वमन्त्री एनपी साउदसँग एमालेका नरबहादुर धामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धामी यसअघि कांग्रेसका बहादुरसिंह थापासँग पराजित भएका थिए ।
कन्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाश दाहालकी पत्नी बिना मगर वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार छिन् उनीसँग कांग्रेसका दिवान सिं बिष्टले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा पनि बिष्टले मगरलाई पराजित गरेका थिए ।
प्रकाशित :मंसिर १६, २०७४
मैदानमा तन्नेरी उम्मेदवारहरू
४ नम्बर प्रदेश चुनावी प्रक्षेपण
१ नम्बर चुनावी सरगर्मी
टिकट नपाउनेहरूका नाममा...
को होला प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री मंसिर १७, २०७४